China Glass Bottle IV Ngwọta Ntanụ Ndị na -emepụta na ndị na -ebubata ya IVEN
Usoro Nweta Ngwọta IV - karama iko LVP
A na-eji ahịrị mmepụta karama IV ihe eji eme ihe maka karama iko IV nke ịsa ahụ 50-500ml, depyrogenation, ndochi na nkwụsị, na-ekpuchi. Enwere ike iji ya maka mmepụta glucose, ọgwụ nje, amino acid, emulsion abụba, ihe na -edozi ahụ na ndị na -ahụ maka ndụ na mmiri mmiri ndị ọzọ wdg.
A na -eji igwe a maka ịsa ahụ dị mma maka karama iko infusion, na -atụgharị gaa n'iji mmiri nkịtị, mmiri dị ọcha, mmiri ntụtụ, ikuku mkpakọ dị ọcha, mmiri ntụtụ ọhụrụ na ikuku dị mkpa iji saa karama ahụ.
Ọwara sterilization Laminar na-asọba sterilaiz vial na-ewepụ ya, ọ nwere ike iru ogo kacha elu 300 ～ 350 ℃, oge ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma maka nkeji 5-10.
O nwere mpaghara arụ ọrụ atọ (mpaghara preheat, mpaghara kpo oku, mpaghara jụrụ oyi).
Na -ejuputa, na -ewepụ, Nchaji Nitrogen, igwe na -akwụsị
Akụ na -ejuputa na -anabata ndochi valvụ GEMU nke Germany, nkenke dị elu.
Nitrogen na -akwụ ụgwọ ozugbo o juputara, yana nchedo nitrogen n'etiti nchaji nitrogen na nkwụsị.
Enweghị karama enweghị ndochi, ọ nweghị karama enweghị oghere, ọ nweghị karama na -enweghị nchaji nitrogen, hụ na ọkwa ikuku dị na tank ikuku n'oge agụụ, ka ọ dị ugbu a, gbaa mbọ hụ na ikuku oxygen kwụsịrị mgbe ọ kwụsịrị (njikwa n'ime 1.0%)。
Igwe na -ejuputa na nkwụsị
Igwe eji emeju mmiri Aseptic bụ ọrụ zuru oke ma kwụsie ike. Enwere ike idozi olu ndochi site na HMI, ebe a anyị nwere ORABS nwere mkpuchi ikuku ikuku laminar igwe anaghị agba nchara.
A na -ejikarị ya eme ihe maka karama iko. Ịga n'ihu ọrụ. Na -atụtụ ma na -amị amị, n'otu oge ahụ na -atụgharị okpu. Mgbe emechara ya, okpu ahụ nwere nha na ihu ya dị larịị, ọdịdị dị mma. Nnukwu ọsọ, mebiri emebi.
1.Pipe dị iche maka nhicha nhicha, enweghị mmetọ obe, dịka ihe GMP chọrọ.
2.Imeju isi synchronously tracks na -ejuputa, izi ezi zuru oke.
3.Adopt sistemụ mbanye servo zuru oke, enweghị nnyefe igwe.
Enwere ike ịhazi ọrụ nchaji Nitrogen (tupu ejuputa, n'oge ndochi, mgbe emejuchara).
5. Oge mgbanwe ngwa ngwa maka nha karama dị iche iche.
Na -ejuputa, Nchaji Nitrogen, Igwe na -akwụsị
Ike imeputa ihe 60-100BPM 100-150BPM 150-300BPM 300-400BPM
Tụnyere karama 50ml, 100ml, 250ml, 500ml
Na -ejuputa ziri ezi ± 1.5%
Igwe mpịakọta (m³/h) 0.6Mpa 1.5 3 4 4.5
Ịnye ọkụ KW 4 4 6 6
Ibu T 7.5 11 13.5 14
Ogo igwe (L × W × H) (MM) 2500*1250*2350 2500*1520*2350 3150*1900*2350
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ na -enye ndị na -emepụta igwe na -ejuputa igwe ampoule - larịị na -emeju ihe njuju - IVEN
Osote: Igwe sirinji ejupụtarala (gụnye ọgwụ mgbochi)
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara,